Microsoft Dynamics 365 | सीआरएम र ईआरपी को संयोजन - उनको टेक स्कूल
Microsoft Dynamics 365 | सीआरएम र ईआरपी को संयोजन
Dynamics 365 के हो?
साधारण डेटा मोडेल
कार्यालय 365 सँग एकीकरण
Microsoft Dynamics 365 को खर्च को राशि छ?
व्यापारहरू आज कठिनाइहरूको खोजी गर्दै छन् र डिजिटल रूपान्तरणमा प्रतिक्रिया गर्न तयार छन्। लट्टरर र ठूला संघका दुवै पक्षले यी ढाँचाहरूसँग फाइदा उठाउँछन् जुन उनीहरूको अपरेशनका प्रत्येक कार्यलाई सजिलै सुदृढ पार्दछ ताकि उनीहरूले फाइदा लिनका लागि थप आवश्यक व्यावसायिक दृष्टिकोणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछ। हालको परिस्थितिमा प्रायः प्रत्याशित डिजिटल परिवर्तनहरू बीचको एक उत्कृष्टता Microsoft Dynamics 365 थियो।
माइक्रोसफ्ट गतिशीलता 365 हटाउँदै गर्दा, सम्मोहनको हरेक एक अन्त्यमा पुगेको छ। डिजिटल परिवर्तनको साथ निर्मित, माइक्रोसफ्ट डेंटिनिक 365 को न कि सीआरएम (ग्राहक रिश्तेदार प्रबंधन) वा ईआरपी (इन्टरप्राइज रिसाइज प्लान प्लान) को लागी व्यवसायहरु लाई सहयोग गर्न को लागी अपेक्षा गर्दछ, तर अझै दुवै को मिश्रण। गतिशीलता 365 मुख्यतः एक क्यान क्लाउड-आधारित ईआरपी र CRM प्रयास ढाँचा हो जसले सबै भन्दा अनुकूलन क्षमता र ढिलाइ समाधान गर्दछ।
माइक्रोसफ्ट डनेनिक्स 365 ले एक चरणलाई सङ्गठनलाई पहिलो स्थानमा, तिनीहरूको अपरेसन प्रदान गर्न काम गरेको छ। यो तपाईंको व्यापार प्रणालीमा यसको विशिष्ट अवस्था र संरचनामा फिट गर्न स्ट्रिम गर्दछ। बिट बिट, तपाईले अनुकूलन समाधान पाउनुहुनेछ जुन तपाईले Microsoft एप्सस्रोतमा आवश्यक पर्दछ।
यो कोड नाम - मेडिरा अन्तर्गत चार्ज गरिएको थियो। उत्पादमा केहि कारण निर्माण गरिएका अनुप्रयोगहरू छन् जुन विशिष्ट पदानुक्रमीय क्षमताहरू जस्तै सञ्चालन, प्रदर्शन, वित्तीय, फील्ड लाभ सम्झौताहरू योगदान, निरीक्षण र स्वचालन स्वरुप लाभ प्रदान गर्दछ। तिनीहरू डेरिटिक्स 365 को रूपमा सञ्चालनका लागि नाम, डेन्टिओक्स 365 को लागि फिल्ड सेवा, डाइनिजिक्स 365 सेल्सको लागि, डेभिक्सिक्स 365 प्रोजेक्ट सेवा स्वचालन र Dynamics 365 को ग्राहक सेवाको लागि नाम दिइएको छ।
Microsoft Dynamics 365 सँग एक साधारण डेटा मोडेल हो जसले माइक्रोसफ्टको कार्यालय 365 र संस्थागत API सँग विभिन्न व्यापारिक अनुप्रयोगहरूको साथ बलियो एकीकरण प्रदान गर्दछ। Cortana खुफिया, पावर बीआई र इन्टरनेटको चीजहरू प्रत्येक माइक्रोसफ्ट डाइनिटीज 365 को एक भाग हो। यहाँ। ग्राहकहरु लाई अर्को स्टोर मा अनुप्रयोगहरु को पतन गर्न सक्छन् - Microsoft AppSource।
Microsoft Dynamics 365 सँग Office 365 सँग चिकनी एकीकरण छ, विशेष गरी आउटलुकको साथ। तपाईं सिधै Outlook बाट रेकर्डहरू, रिपोर्टहरू र अनुरोधहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि समान इमेल इमेल छोडेर रेकर्ड समायोजन गर्न र परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं समान तरिकाले सम्पादित कागजातहरू देख्न सक्नुहुनेछ, साइडबारका सबै लाभार्थीहरूको खाता स्थिति, जब तपाई धेरै ग्राहकहरू सन्देश गर्दै हुनुहुन्छ। तुलनात्मक घटकले यो एकीकरण कार्य असाधारण रूपमा बनाउँछ।
त्यहाँ Microsoft Dynamics 365 को दुई संस्करणहरू छन्, इन्टरप्राइज र बिजनेस रिलीज। घटनामा तपाईंको संघनहरूसँग 250 क्लाइन्टहरू भन्दा बढी छ, इन्टरप्राइज संस्करण तपाइँको सङ्गठनको लागि उपयुक्त हुनेछ। तथ्यको बावजूद, यदि तपाईंको सोसाइटीले 10 नजिकै 250 क्लाइन्टहरूमा छ, व्यापारिक रिलीजले तपाईंको आवश्यकताको सेवा गर्नेछ। चूंकि बिजनेस संस्करण littler संघों को आसपास केंद्रित छ, यस तरिका मा यसले वित्तीय को लागि गतिशीलता 365 को शामिल गर्दछ। इन्टरप्राइज संस्करणको लागि, सञ्चालन 365 प्रस्तावित छ र वित्तीयहरू होइनन्।
पूर्ण ग्राहकहरूको लागि, व्यापार संस्करण अनुमति हरेक महिना $ 50 प्रति ग्राहक हो। लाइट क्लाइन्टले यसलाई हरेक महिना प्रति ग्राहक $5मा लाभ पुर्याउन सक्छ। जबकि इन्टरप्राइज एडिशन दुई प्रबन्धहरू मा आउछ - 1 लाई व्यवस्थित गर्नुहोस् अपरेसनको अपवादको साथ प्रत्येक कोण समावेश गर्दछ। यो हरेक महिना मूल्य $ 115 प्रति ग्राहक हो। व्यवस्था2प्रत्येक सहित सञ्चालनहरू समावेश गर्दछ र हरेक महिना $ 210 प्रति ग्राहकको रूपमा मानिएको छ। लाइट क्लाइन्टले यसलाई हरेक महिना $ 10 प्रति ग्राहकमा लाभ पुऱ्याउन सक्छ।
यो धेरै विज्ञापित 'डिजिटल परिवर्तन' को लागी संघको लागि ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन र इन्टरप्राइज रिसाइज प्लान्ट दुवै परिवर्तन गर्न जाने राम्रो छ। घटनाहरु अविश्वसनीय आकर्षक र केहि को लागि आँखा को बाहिर राखन को लागि केहि हो। माइक्रोसफ्टको अघिल्लो सीआरएम र ईआरपी संस्करणहरू अझै उपस्थित छन् हालैको पछाडि र घटनाक्रमका साथ।
Microsoft Exchange Server 2013 को उन्नत समाधान